Isbahaysiyo - Proton California
Maadaama ay tahay xarun goboleed, Xarunta Caafimaadka Kansarka Kansarka ee Protons waxay la shaqeysaa bukaanada dhamaan nidaamyada daryeelka caafimaadka ee San Diego iyo Mareykanka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay xiriirka aan la sameysanay qaar ka mid ah nidaamyada daryeelka ee sharafta leh.
Kuxirnaashahan ayaa noo oggolaanaya inaan siino helitaan intaa ka sii badan oo ku saabsan daaweynta daaweynta badbaadinta proton iyo ka-qeybgalka tijaabooyinka caafimaad ee aadka loogu baahan yahay iyo baaritaanka.
Waxaan ku faraxsanahay inaan xiriir la leenahay Shabakada Kansarka Caafimaadka ee UC San Diego. UC San Diego (UCSD) Caafimaadku waxay hoy u tahay Xarunta Caafimaadka Kansarka ee caanka ah ee Moores - mid ka mid ah kuwa aad u yar oo ka mid ah xarumaha Kansarka Qaranka ee loo qoondeeyay xarumaha guud ee kansarka ee Maraykanka. Sidoo kale waxaa xusid mudan, Caafimaadka San San Diego (UCSD) Caafimaadku waxay si joogto ah uga heshaa lacagaha ugu badan ee cilmi baarista caafimaad laga helo Machadka Qaranka ee Caafimaadka, waxayna leedahay boqolaal tijaabo caafimaad ah marwalba mar.
Isbitaalka carruurta ee Rady-San Diego ayaa ah xarun daryeel 524-sariirood ah oo daryeelka carruurta ah taas oo ah isha ugu weyn ee adeegyada caafimaad ee dhakhaatiirta carruurta ee San Diego, koonfurta Riverside iyo gobollada Imperial. Rady Children waa cusbitaalka keliya ee ku yaal aagga San Diego oo u go'an gaar ahaan daryeelka caafimaadka carruurta waana xarunta keliya ee loogu talagalay carruurta dhaawacyada carruurta ka soo gaara. Barnaamijka kansarka carruurta ee Rady Children waxaa si joogto ah loogu qiimeeyaa kuwa ugu wanaagsan dalka Warbixinta Mareykanka & Warbixinta Adduunka.